ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့စီးပွားရေး | မျှော်လင့်ခြင်း Medical Center မှတွင် Dream
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို network ကိုဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအတွက်
အကြောင်းမျှော်လင့် Medical Center မှတွင် Dream
မျှော်လင့်ခြင်း Medical Center မှတွင် Dream
ကြားရက်များစောင့်ရှောက်မှု 09:30 ~ 18:30, စနေနေ့ 09:30 ~ 16:00, နေ့လည်စာနာရီ 13:30 ~ 14:30, ညဥ့်အခါစောင့်ရှောက်မှု 19:00 ~ 21:00
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု 02-2002-8681 02-2002-8683~ 4
ကြားရက်များစောင့်ရှောက်မှု 09:00 ~ 17:00
နေ့လည်စာနာရီ 12:30 ~ 13:30
ဆေးဘက်ထောက်ခံမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမခွဲခြားဘဲစီးပွားရေးအခွအေနနေမကောင်း၏, ဒီဆေးဝါးမှအကြိုးခံစားနိုင်ဖျားနာ haejuneunde ဖြစ်ပါသည်. မိသားစုကိုပြံ့နှံ့တစ်ခုလုံးကိုမိသားစုထဲမှာတစ်ဦးကလူတစ်ဦးအကျပ်အတည်းအတွက်လဲကြလိမ့်မည်. အထူးသဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများ, နိုင်ငံခြားရေးအလုပ်သမား, ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ, etc ဆေးပညာမျက်စိကန်းသောအစက်အပြောက်၏ရှေ့တော်မှောက်ကနျြးမာရေးအာမခံအပါအဝင်ကျန်းမာရေးစနစ် access ကို, ရဖို့မနိုင်ဆေးရုံပြံ့နှံ့ကုသမှု၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမလာပါဘူး. ထိုအိပ်မက်မျှော်လင့် Medical Center မှတွင်ကစီးပွားရေးအခက်အခဲများနှင့်အတူယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများအတွက်လုံလောက်သောဆေးဝါးကုသမှုန်ဆောင်မှုမခံမယူပါဘူး, နိုင်ငံခြားရေးအလုပ်သမား, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုစီမံကိန်းကိုတိုးချဲ့, ထိုကဲ့သို့သောဒုက္ခသည်များအဖြစ်အားနည်းချက်အုပ်စုများအတွက်ဂရုစိုက်.
ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုများနှင့်ချက်ချင်းပေါက်ဘော်တော်(ညီအစျကို, အစ်မ မှလွဲ.)
ရက်ပေါင်း 90 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဇာတ်ကောင်နေထိုင်၏နောက်ဆုံးကာလဝင်ရောက်ပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်းအပေါ် အခြေခံ.
ယခုနှစ်များအတွက်ဆင်းရဲမွဲတေမှုလစဉ်ဝင်ငွေ, အိမ်ခြံမြေရည်ညွှန်းအဆင့် 200% အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်များ(ဒါဟာကုသမှု၏အရေးတကြီးပေါ် မူတည်. ထောက်ပံ့ထားနိုင်ပါတယ်)
အချို့သောအချက်များသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဇာတ်ကောင်စဉ်အတွင်း Written စာမေးပွဲရမှတ်စာရွက်များ jinryobi ထောက်ခံမှု
- လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နိုင်ငံခြားအထောက်အပံ့၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကုသမှုမဖြစ်နိုင်လျှင် - သငျသညျထောက်ခံမှုငြိမ်းအခြားတရားမဝင်နည်းလမ်းဖြင့်မိစ္ဆာသို့မဟုတ်ထောက်ခံရခဲ့လျှင်, လျော်ထောက်ခံမှုကုန်ကျစရိတ်ခံယူသင့်ပါတယ်. - ထောက်ခံမှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း, ပစ်မှတ်ရောဂါအပေါ် မူတည်. ရွေးချယ်ထားသည့်မရနိုင်ရင်တောင်.
ထောက်ခံမ : ပြင်ပလူနာမူးယစ်, ရောဂါအမည်ဖေါ်ခြင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများမိတ္တူ, CD ကိုမိတ္တူ, သွားဘက်ဆိုင်ရာကုသ, ဂါးဒီးယန်းအစားအစာများ
လျှောက်လွှာနှင့်လျှောက်လွှာနှုန်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက် On-Dream Hope Medical Center ၏အကဲဖြတ်ဇယားပေါ်တွင်အခြေခံသည်
ရုံးကနာရီ : လေး 9:00 ~ 12:30, မှနျးလှဲ 13:30~ 17:00
ရုံးကနာရီ : လေး 9:00 ~ 11:30, မှနျးလှဲ 13:30~ 16:00
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် : ၏လတ်တလောကာလနောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်ကိုရီးယားများအတွက်လိုအပ်သော entry ကိုတံဆိပ်ခေါင်းထက်ပိုရက်ပေါင်း 90 နေထိုင်ရှိမရှိ Check
အဘယ်သူမျှမ entry ကိုတံဆိပ်ခေါင်းတစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိသည်ဆိုပါက mijicham, ဒါဟာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလက်မှတ်ဖြင့်အစားထိုးသည်
ဥပဒေရေးရာနိုင်ငံခြားနေထိုင်သူများ၏ဖြစ်ရပ်မှာသူတို့ရဲ့ဂြိုလ်သားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ကိုဆောင် ခဲ့. သင့်, မှတ်ပုံတင်မထားတဲ့(တရားမဝင်သော) နိုင်ငံခြားသားများအားဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်
လူနာရည်ညွှန်း(အခြားအေဂျင်စီများကနေတာဝန်ပေးသောအခါ,) ဒေါင်းလုပ်တောင်းဆိုမှု Form ကို
ဆေးကုသမှုလွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဆရာဝန်၏လက်မှတ်(အခြားအဖွဲ့အစည်းများအတွက် Yonsei University က၏တန်ခိုးရရှိနိုင်မှုနှင့်ဤနေရာတွင်ဆွေးနွေးတင်ပြ)
ဝင်ငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု၏မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်(category အမျိုးအစားအလိုက်အခွန်ကောက်ခံလက်မှတ်, ②ငှားရမ်းစာချုပ် / အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်အတည်ပြုချက်,6၆ လအတွင်း Passbook ငွေလွှဲကြောင်းကြေငြာချက်)
Ondream Hope Medical Center မှလူမှုလုပ်သား
စိတ်ဓာတ်, Society က, ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးခြင်း, ပြည်ပအေဂျင်စီများနှင့်ချိတ်ဆက်, ထိုကဲ့သို့သောကွန်ရက်အဖြစ်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ
ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
စိတ်ဓာတ်, Society က, ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးခြင်း, ပြည်ပအေဂျင်စီများနှင့်ချိတ်ဆက်, ဆက်စပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ Networking, အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ၊
လိပ်စာ ဒေါင်, Jongno-Gu, ဆိုးလ် saemunan9တတိယအထပ်အိပ်မက်ထဲကမျှော်လင့် Medical Center မှအပေါ်ဆိုးလ်မြို့ကြက်ခြေနီဆေးရုံ
လျ. ဧရိယာ code ကိုစာအရေးအသား02)2002-8683~ 4
Hyundai မော်တော် Chung Mong-Koo ဖောင်ဒေးရှင်း
မူပိုင်ခွင့် 2012. ကျန်းမာသောအိမ်နီးချင်းစင်တာ. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.